Ka kabidda ardayga kharashka Jaamacaddeed
Mudnaanta kowaad ee loo kabo tacliin sare, waa in kor loo qaado tirida ardayda gasha waxbarashada jaamacaddeed, taas oo ku timaada marka qoysaska awoodaan inay dhalintooda u diraan jaamacaddaha ayagoon ka wal waleen kharashka tirabada ee lagu dhigto.
Marka aad fiiriso ka kabidda ardayga kharashka jaamacaddeed ee dowlada bixiso, waxaa muhiim ah in laga fiiriyo dhanka simida ardayga reer ladan ka soo jeeda iyo midka qoys dan yar ka dhashay. Kabidda kharashka jaamacaddeed waxaa laga bixiyaa canshuuraadka la soo aruuriyo.
Fa’idada laga helaayo kabidda kharashka jaamacaddeed waxaa ugu horeeya kor u qaadida aqoonta bulshada taas oo horseeda kor u kac dhakhliga ardayga dhameeya waxbarasho jaamacaddeed, waxaana xal u heleeynaa sababta bur-burka keentay markii hore oo aheyd jaahilnimo iyo dhaqaale la’aan.
Qaabka uu shaqeeyo barnaamijkaan waa sidaan, Dowlada waxay siisaa kaalmo dhaqaale ardayga isku diwaan galiyo kuliyad laga bixinaayo hay’ad tacliin sare (mida dowlada ama kuwa gaarka ah) oo wasaarada waxbarashada dowlada aqoonsantahay, si ay dowlada u daboolo baahida ardayga ee kharashaadka waxbarashada , oo ay ku jiraan qarashka barida, khidmadaha , buugaagta iyo agabka.
Su’aasha isweydiinta mudan waa yaa ku qalqaalin karo dowlada suurtagalnimada barnaamij noocaan ah?
Waxaa isbuucaan magaalada Muqdisho ku shiraayo madaxda in ka badan 45 jaamacaddood oo dalka ku yaala, waxaa fiicnaan laheed hadii la gaarsiiyo madaxdaas culeyska qoysaska ka heesto in ay bixiyaan kharashka jaamacaddeed iyo mas’ulida ka saaran dowlada dhalinyarada.
Shakhsiyadaan qofka leh waxaa u fudud shaqooyinka la xiriira xayawaanka, qalabka ama mashiinada, waxaa ku adag inuu ka shaqeeyo hawlaha bulshada sida macalin, kalkaaliye caafimaad, wacyigalinta bulsha iwm.
Qofka leh shakhsiyada farsamo waxaa qiimo weyn u leh waxyaabaha la taaban karo sida xoolaha iyo beer aad beeran kartid ama waxyaabaha la dhiso oo ka fiicnaan karo wixii ka horeeyay. Shakhsiyadaan qofka leh wuxuu nafsadiisa u arkaa inay ku saleysan tahay xaqiiqda, farsamo iyo wax soo saar.
Inta badan waxaa laga yaabaa qofka inuu lahaado hal shakhsiyad uu ku xoogan yahay iyo shakhsiyad kale oo soo raacdo tan lagu sifeeyo.
Hadii aan soo koobno, waxaa laga yaabaa inaad dooroto taqasus aad ku qanacsan tahay oo ku saleysan shakhsiyadaada noqon karana mid horumar kuu horseeda.
Shakhsiyada Farsamo taqasuskee ku haboon?
Maamulka Khayraadka Dabiiciga
Haduu alle idmo waxaan maqaalada soo socda ku soo gudbin doonaa shanta kale ee shakhsiyad jawi shaqo oo kuu fududeen doonta inaad dooratid taqasus ku haboon shakhsiyadaada.
Waxaa ardayda inta badan na waydiiyaan taqasuska aan rabo iyo mid waalidkay ila rabo isma waafaqsan maxaa sameeyaa? Jawaabta waa waalidkaa wixii fiican buu kula rabaa, lakiin waxaa laga rabaa inaad macluumaad dheeri ah tustid waalidka sababtaa aad u dooranaysid taqasuskaan iyo fa’idada uu kuu lee yahay.
Qiimaha Dhaqaale aad ka heleyso waxbarasho Jaamacaddeed
Hadafka tacliinta sare ee dalkeena wuxuu ku saleysan yahay umad inteeda badan ay yihiin dhalinyaro oo marxalad bur-bur ka sii baxaysa, ujeedada ugu weyn ee waxbarashada waa in ay fududaysaa is dhexgal iyo wada noolaanshaha mushtamaca.
Tacliinta sare dalkeena marxalado kala duwan bay soo martay, ka hor 2010-kii waxaa suurta gal ahaa adigoo dugsi sare ka soo baxay inaad heshid shaqo aad kala soo baxdid nolol maalmeed, lakiin hada shaqooyinkaas maba jiraan guud ahaan, rajana lagama qabo in mustaqbalka la heli doono shaqo macquul ah oo arday dugsi sare ka soo baxay uu qaban karo.
Maalmahaan waxbaba ma qabsan kartid hadii aad shahaado dugsi sare kaliya heesatid, ugu yaraan waxaad u baahan tahay tacliin sare nooc kasta ha noqotee, waana sida kaliya aad ugu hari kartid facaa waa inaadan Jaamacad aadin oo aad wax kale ku mashquushaa.
Waxaan mugdi ku jirin waqtigaan dadkeenu hormaray, in uu culeys weyn oo dhaqaalaha uu soo koray qoysaska dhanka bixinta qarashka jaamacadda, ma jirto Jaamacad dalka ku taala oo aan dhaqaale la iska qaadin ha noqo mid qaas ah ama mid dadweynaha lee yihiin, waxaa ardayga loo sheegaa deeq waxbarasho ayaad heshay, lakiin waxaa jira qarashaad dadban oo gaarayaa $100 ilaa $230 semester- kiiba, waana nasiib daro diiniyan iyo dhaqaniyay inaan ka amusnaano qiyaanadaas.
Waxaan ka codsanayaa ardaydii sanadkii hore dugsiga sare ka baxday oo Jaamacaddaha galay inay la wadaagaan ardaydaan dugsiga sare dhameeyay waxay kala kulmeen qarashaadka dadban ee jaamacaddaha.
Ujeedka maaqaalkan ma aha in cid si gooni ah farta loogu taago, lakiin waa in ardayda aan u sheegno “timir laf baa jirta” oo ah mas’uliyad saaran bahda tacliinta sare.
Sidee ardayga ku heli karaa waxbarid guud ahaan?
U qasdida waxbarid guud ahaan waa beegsashada dhaqanka wanaagsan ee baridda taasoo daboosha baahida waxbarasho ee arday kasta.
Waxaa jira sagaal mabda oo hagta u qasdida waxbaridda guud ahaan, kuwaas oo ka ah:
1) Isticmaal siman waxaa loola jeedaa in arday kasta uu helo fursad fahan si ugaaro ujeedada .
2) Dhibyari in la isticmaalo taasoo saamaxaysa samaysa hagaajin lagama maarmaanka ah.
3) Fudud oo xasaasi ah waxay u baahan tahay dhimida kakanaanta iyo madmadowga.
4) Macluumaad la geran karo waa ku talinta bixinta macluumaad habab kala duwan si ay u saamaxdo dareemida awood ama liidasho.
5) Dulqaadasho khalad waxay weydiineysaa macalimka uu tixgeliyo in dhammaan ardayda aysan ka bilaabin meel isku mid ah ama wax ku bartaan xawaare isku mid ah.
6) Ka fekerit howl yari waa marka macalinka uu ku fekero sida ugu fiican ee lagu xajin karo feejignaanta ardayga iyo yareenta caajiska.
7) Dhanka baaxada iyo meesha waxay ku hageesaa macalinka isticmaalida qalab bixinta casharada.
8) Horumarinta waxbarashada bulshada hadafka laga leeyahay waa sidii loo kordhin lahaa isdhexgalka ardayda iyo macalinka.
9) Jawi waxbarasho waa rabitaan in la siiyo sareyn waxa laga filayo ardayga lana boorriyo hab waxbarida uu ardayga yahay udub dhexaadka iyo dabacsanaan.
Ardayda ayaa og sida ugu fiican wax ku bartaan, aan qirno fikirka ardayda ku soo biiriyaan fasalka, anagoo iyaga ka dhigeyna qayb muhiim u ah abuuridda jawi waxbarasho wanaagsan.
Hadii aad qabtid su’aal ama uu jirto wax fikir ah fadlan hoos nagu soo gudbi.
Sidee ku heli kartaa Jaamacad kugu haboon?
Ardayda qaar waxay doonayaa inay helaan Jaamacad dhinac walba ka dhisan, run ahaantii ma jirto Jaamacad dhameestiran oo dhinac walba ka dhisan, lakiin waxaad heli kartaa Jaamacad aad ku qanci kartid kuna siinaysa waxbarasho tayo leh. Doorashada Jaamacad waa ogaanshaha qofka aad tahay iyo waxa aad rabtid inaad noqotid, kadib aad raadisid Jaamacad buuxin karta baahidaada rabitaanka iyo qofka aad tahay. Waxaad qaadi kartaa tillaabooyinkaan si aad u ogaato Jaamacaddee kuu horseedi karta koritaan aqooneed.
Go’aanso waxa aad ku xulanaysid Jaamacad
Is weydii maxaa kuu muhiim ah, qof keebaa rabtaa in aad noqotid iyo meesha, markaas waxa aad fahmi kartaa nooca Jaamacadda kuu saamaxeesa in aad gaarto hiigsigaaga waxbarasho.
Hoos waxaa ku xusan dhinacyada u baahan inaad tixgaliso markaad xulaneysid Jaamacad:
Jiritaankeda ma ka badan yahay 5 sano
Xarunta ay degen tahay ma kiraa
Masaafada ay kuu jirto
Taqasus aad rabto ma ka heli kartaa
Isku dhafnaanta ardayda (ma ka soo kala jeeda qabiilo iyo aragtiyo kala duwan)
Cilmi baaris ma leedahay
­Waxyaabaha kor ku xusan kuwee sameyn weyn ku leh go’aan gaaristaada Jaamacadda aad aadi doontid?
Sidoo kale waxaad maanka ku heesaa hadafka aad ka leedahay aadista Jaamacad, ma wax aad rabtaa inaad ku taqasustid shaqo gaar ah, mise waxa aad rabtaa aqoon shaqooyin kala duwan lagu qaban karo? Hadii ujeedaadu tahay taqasus gaar ah, Jaamacadda aad ku fakireysid ma ku xoogan tahay dhankaas?
In kastoo fiican tahay in aad madaxa ku heesid Jaamacaddo aad is leedahay waa kugu haboon yihiin, waxaa fiican bilowga kala doorashada Jaamacaddaha in aad dhamaantood siisid fursad aad xogtooda ku ogaatid.
La hadal dadka kugu dhow, sida waalidkaa, macallimiintaada, qaraabadaada iyo maamulka dugsiga sare u sheeg hadafkaaga taqasuska Jaamacaddeed, kadibna weydii taladooda Jaamacadda ku haboon taqasuskaaga.
Inta aad ku guda jirtid kala doorashada Jaamacaddaha, is weydii su’aalahaan:
Waa maxay waxa aad ka raadinaysid inay Jaamacad lahaato?
Waa maxay hiigsigaaga taqasus?
Waxa aad ku jirtaa xili isbedal maskaxeed taas oo laga yaabo inay keento isbedal jawaabta su’aalahaan.
​Hadii aad qabtid su’aal ama uu jirto wax fikir ah fadlan hoos nagu soo gudbi.